ANKARA - Madaxweynaha dalka Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan, ayaa waxaa loo dhaariyay Xafiiska, islamarkaana loo caleema-saaray, kadib munaasabad si heer sarre ah looso agaasimay oo lagu qabtay xarunta Baarlamaanka.
Xafladda caleemo-saarka iyo dhaarinta ayaa waxaa kasoo qeybgalay 22 Madaxweyne, Labo Ra'iisul Wasaare, Wasiiro arrimo dibadeedyo, Safiiro iyo Diblumasiyiin ka socday Beesha Caalamka.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed [Farmaajo] oo kamid ah Madaxda lagu casuumay xafladaan ayaa kasoo muuqday.
Dhaarinta iyo Caleema-saarka kadib, Madaxweyne Erdogan, oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa jeediyay ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay inuu diyaar u yahay inuu sameeyo "Turkey oo xoogan".
In ka badan 25 Madaxweyne, oo uu ku jiro Farmaajo, 17 Ra'iisul Wasaare, Amiirro iyo madax kale ayaa ka qeybgalay caleema-saarka Erdogan, waxaana la adkeeyay amaanka dalkaasi guud ahaan.
Waxaa la lagu wadaa Erdogan inuu soo magacaabo Golle Wasiirro oo loo badinayo inuu kasoo xulan doono kuwa wadaniyadda ku fogaatey, ee taageerada uu ka helay doorashadii madaxtinimada iyo mida baarlamaaniga ee bishii June.
Erdogan oo 64 jir ah ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu awooda badnaa ee soo mara Taariikhda dalkaasi tan iyo markii la aas-aasay hal qarni kahor kadib burburkii dowladda Ottoman [Cismaaniyiinta].
Isbedelka cusub ayaa meesha ka saarey xilkii Ra'iisul wasaarenimo, iyadoo uu Erdogan awoodaha cusub ee uu helay ay kamid yihiin inuu isaga soo magacaabayo Gollaha Wasiiradda, inuu maamulo, sidoo kale uu xilka ka qaadi karo cid kasta isagoo uusan ogolaansho la waydiisanaynin Baarlamaanka.
Taageeriyaasha Erdogan ayaa u arka isbedelka dhacay mid ay ku abaalmarinayaan hogaamiye ka dhigay qiimaha Islaamka midka ugu sareeya nolosha shacabka, sidoo kale u horseeday wadanka horumar dhaqaale oo la taaban karo.
Tan iyo wixii ka dambeeyay afgembigii fashilmayay ee July, 2016 kaasi oo la doonayay in xilka looga tuuro ayaa sii xoogeysanayay awooda Erdogan, isagoo afti ku meel-mariyay inuu helo awood badan, sidoo kalena qabtey doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay [Snap election], taasi oo lagu waday inay dhacdo dhamaadka 2019.
24-kii bishii June ayaa mar labaad loo doortay Recep Tayyip Erdogan xafiska Madaxweynaha wuxuuna ku helay 52.6% codadkii ay dhiibteen in ka badan 56 milyan oo qof, taasi oo sidoo kale xisbigiisa haya talada ee AK part ku guuleystay kuraasta ugu badan ee Baarlamaanka.
Recep Tayyip Erdogan, oo ah Madaxweynaha 12-aad ee Turkiga ayaa soo noqday Ra'iisul Wasaare 2003 ilaa 2014. Waxa uu sidoo kale noqday duqa magaalada Istanbul intii u dhaxeysay 1994 illaa 1998.
Xisbiga uu hogaamiyo Erdogan, ee hadda haya Taladda dalka Turkiga ayaa la aas-aasay sanadkii 2001-dii. Guushoodii ugu horeysay waxay halayn July sanadkii 2007, markaasoo saaxada siyaasada Turkiga kusoo biirayn.